खोप अभियान अस्तव्यस्त- समाचार - कान्तिपुर समाचार
खोप अभियान अस्तव्यस्त
स्वास्थ्यकर्मी, उच्च ओहदाका कर्मचारी, नेता तथा मिडियाकर्मीले समेत तेस्रो मात्रा लुकीछिपी लगाइरहँदा सरकारी संयन्त्रले भने पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाएकाहरुको रेकर्ड नै दुरूस्त राख्न सकेन
जसले नियम मिचेर तेस्रो डोज लगाएका छन्, उनीहरुले आधिकारिक खोपको क्यूआर कोड पाउँदैनन् । – संगीता कौशल मिश्रा- प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय
पुस ३०, २०७८ बुनु थारु
काठमाडौँ — सुमन (नाम परिवर्तन) पेसाले स्वास्थ्यकर्मी हुन् । निजी अस्पतालमा कार्यरत उनले दुई साताअघि नै कोरोनाविरुद्धको तेस्रो मात्राको खोप लगाइसके । ‘सधैं संक्रमित बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ, ओमिक्रोन झन् संक्रामक छ,’ ३० वर्षीय उनले भने, ‘सरकारले कहिले दिने हो टुंगो छैन, त्यही भएर लगाइहालेको ।’ उनले अनलाइन फाराम नै नभरी खोप लगाएका रहेछन् ।
४५ वर्षीया विनीता (नाम परिवर्तन) सरकारी कार्यालयमा कार्यरत छिन् । उनी र उनका केही साथीले पनि तेस्रो मात्राको खोप लगाइसके । ‘सरकारले दिने त भनेको छ, तर कहिले पालो आउने हो,’ विनीता भन्छिन्, ‘हामीले त पहिलो डोज भनेर ढाँटेर लगायौं ।’
बिहीबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा कुल जनसंख्याको ५०.९ प्रतिशतले एक मात्रा खोप लगाएका छन् भने पूर्ण खोप लगाउने ३८.५ प्रतिशत मात्र छन् । लक्षित जनसंख्याको ७७.६ प्रतिशतले पहिलो र ५८.७ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएका छन् । पहुँचवालाले लुकीछिपी खोप लगाइरहेकाले सरकारको यो तथ्यांकलाई सही मान्न सकिन्न । किनकि तेस्रो मात्रा लगाए पनि उनीहरूले पहिलो वा दोस्रो मात्रा लगाउन आएको भनेर ढाँटेका छन्, जसले तथ्यांकमै गडबडी देखिन्छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेक लालले सुरुवातदेखि नै अनलाइन दर्ता लागू नगर्दा चुनौती थपिएको बताए । ‘सुरुमै सबैलाई अनिवार्य गरिएन, हतार पनि थियो,’ उनले भने, ‘हामीसँग अनलाइन सिस्टममा व्यक्तिको नागरिकता नम्बर वा केही नम्बर राखेर पहिले लगाएको हो वा होइन भनेर हरेक सेन्टरमा हेर्ने व्यवस्था छैन ।’ उनका अनुसार नेपालका सबै जना इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्, ती व्यक्तिलाई अनलाइन दर्ताको पहुँचमा पुर्‍याउन जरुरी छ ।
‘भारतमा आधार कार्ड नम्बर भन्ने हुन्छ, जुन सबै सेवामा जोडिएको हुन्छ । कुन व्यक्तिले कति मात्रा खोप पायो भन्ने ट्र्याक गर्न सजिलो छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा यस्तो ट्र्याकिङ सिस्टम हुन सकेन ।’ डा. लालले जनमानसलाई सरकारले आश्वस्त पार्न नसकेका कारण समस्या देखिएको बताए । ‘केही समय पर्खिनुस्, बिस्तारै सबैलाई तेस्रो डोज दिइन्छ भनेर सरकारले भन्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अप्रत्यक्ष रूपमा त बुस्टर डोज लगाए तर उनीहरूको आधिकारिक अभिलेख राख्न मिलेन ।’
सरकारले कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतले पूर्ण मात्राको खोप लगाएपछि मात्र ‘अतिरिक्त’ डोज दिने भनेको छ । बिहीबारसम्म ३८.५ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाइसकेका छन् । माघको पहिलो साताबाट फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त डोज दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता कौशल मिश्राले यसबारे जानकारी प्राप्त भएको बताउँदै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । ‘यो कुरा हाम्रो जानकारीमा आएको छ । जहिल्यैदेखि नीतिगत निर्णय गर्छौं, त्यसपछि तेस्रो डोज लगाएको मिति हामी हेर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘जसले नियम मिचेर तेस्रो डोज लगाएका छन्, उनीहरूले आधिकारिक खोपको क्यूआर कोड पाउँदैनन् ।’ उनका अनुसार यसबारे मन्त्रालयमा पनि छलफल भएको छ ।
‘नियम मिचेर खोप लगाउने काम अवैधानिक हो । खोप लगाएर मात्रै त भएन, प्रमाणपत्र पनि चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले नीति नै बनाएको छैन भने प्रमाणित कसरी गर्ने ?’ अनलाइन रजिस्ट्रेसन अझै चुस्त बनाउनेबारेमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताइन् ।
प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ ०७:११
दिल्लीमा हालसम्मकै उच्च संक्रमण
नयाँदिल्ली — कोभिड संक्रमण फैलिएको पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा दिल्लीमा एकै दिन सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन् । दिल्लीमा पछिल्लो २४ घण्टामा २८ हजार ८ सय ६७ मा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ३१ जनाको मृत्युसमेत भएको छ । र, संक्रमणको दर ३० प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि एकै दिनमा सबैभन्दा बढी गतवर्ष अप्रिल २० का दिन २८ हजार ३ सय ९५ संक्रमित भेटिएका थिए ।
त्यतिबेला संक्रमण दर भने ३२.८२ प्रतिशत थियो । गतवर्ष सबैभन्दा बढी संक्रमण दर भने २२ अप्रिलका दिन ३६.२० थियो । तर त्यस दिन संक्रमितको संख्या भने २० अप्रिलको तुलनामा कम पाइएको थियो । संक्रमित हुनेमध्ये करिब ८० प्रतिशतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको जनाइएको छ । भाइरस नै भेटिएको रिपोर्टहरूमा जनाइएको छ । संक्रमितको संख्याको तुलनामा अस्पताल भर्ना हुने र मृत्यु हुनेको संख्या भने कम देखिएको छ ।
दिल्लीमा सेल्फ किटबाट परीक्षण गर्नेको संख्या पनि ठूलो रहेको पाइएको छ । उनीहरूमा संक्रमण देखिए पनि प्रशासनलाई जानकारी उपलब्ध नहुने भएकाले संक्रमितको संख्या अझै बढी हुने अनुमान छ ।
पसलमा ५० रुपैयाँमा पाइने परीक्षण किटको माग पछिल्ला दिनमा निकै बढेको जनाइएको छ । दिल्लीका स्वास्थ्यमन्त्री सत्येन्द्र जैनले तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण ‘पिक’ मा पुग्दै गरेको संकेतका रूपमा लिन सकिने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ ०७:०६
अपुरो भवन, अधुरो शिक्षा
पशुपति धर्मशालाको निरीक्षणपछि मन्त्री आलेले भने– 'कतिपय काम अनुमतिबिना गरेको देखियो'
आकाशमै ‘डोर अनलक’ भएपछि पोखरा उडेको गुणको विमान काठमाडौं फिर्ता
खानेपानीको सपना बल्ल पूरा
राष्ट्रिय सभा बैठक 'विशेष कारणवश' अनिश्चित समयका लागि स्थगित